साउन १२, काठमाडौं । कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको संख्या साढे आठ लाख नाघेको छ । कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनका लागि गएको महाधिवेशनमा भएको क्रियाशील सदस्यको संख्यालाई दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले आसन्न महाधिवेशनका लागि आठ लाख ५२ हजार सात सय ११ सदस्यहरूको नामावली सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो । यसअघि…
साउन १२, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । सोमबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद समाधान भएसँगै शीर्ष नेताहरुले भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् । यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । आज प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका…
विदेशबाट जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैंठकले क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको कानून मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत…
नवनियुक्त स्वस्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठः ब्यापारी कि नेता ?
काठमाडौं । चर्चित ब्यावसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीेले श्रेष्ठलाई आइतबार राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका...
साउन ८, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहान साढे ११ बजे राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफलका लागि सितलनिवास पुगेका अध्यक्ष ओली दिउँसो साढे एक बजे बाहिरिएका हुन् ।राष्ट्रपति कार्यालय...
भीम रावलले फिर्ता लिए सांसदबाट दिएको राजीनामा
साउन ८, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सांसद पदबाट दिएको राजीनामा पत्र फिर्ता लिएका छन् । उनले शुक्रबार बिहान सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर राजीनामा फिर्ता लिएका हुन् । साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुअघि रावलले...
प्रदेश सरकारले गरे ६९ प्रतिशत बजेट खर्चः लुम्बिनीले सबैभन्दा बढी खर्च गर्दा, अन्यको कति ?
साउन ८, काठमाडौं । तपाईलाई लागिरहेको होल देशको विकास कस्तो गतिमा भएको छ । अझ संद्यीय प्रणालीमा रहेको सात प्रदेश मध्ये कुन प्रदेश सरकारले के कस्तो गतिमा विकास खर्च गरेका होलान ? चासो बढदै जाँदा संद्यीय प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष...
बुढानीलकण्ठमा कांग्रेसको पदाधिकारी बैंठक बस्दै, महाधिवेशन पछि सार्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बस्ने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राख्ने गरिएको बैठकबारे तीव्र आलोचना भएपछि देउवा निवासमै बैठक बस्न लागेको हो ।...
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, नेपाललाई पार्टी एकताका लागि दबाब
साउन ७, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ । ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा तीन दिनदेखि सुरु भएको एमालेको १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि हुने भएको हो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान...